Cele Yatkwat - @celeyatkwat Instagram Profile - inst4gram.com
@celeyatkwat - Cele Yatkwat
Don't miss Myanmar celebrities' fashion, news and activities 😉🙋👇 #celeyatkwat @celeyatkwat
Happy Birthday လေးဖြူ လေးဖြူကတော့ ဒီနေ့ မေလ ( ၁၉ ) ရက်နေ့ရဲ့ မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်ပါတယ် ရှေ့ဆက်လျှောက်လမ်းမယ့် အနာဂတ်မှာ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်မှုတွေ များစွာရရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ပရိသတ်တွေကလည်း မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားတွေ ရေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော် ... Phot
တစ်နေရာရာ သွားတော့မယ်ဆို ဘာ accessories ဝတ်ရမှန်း မသိလို့ ခေါင်းရှုပ်နေရတတ်တဲ့ ပျိုမေတို့ရှိလား??? .. ... ပုံထဲမှာ ပြထားတဲ့ accessories လေးတွေကိုဆို ဘယ်လိုနေရာမျိုးကိုသွားတဲ့အခါ ယူဆောင်သွားတတ်ကြလဲ.... ? အောက်က comment လေးတွေမှာ အချင်းချင်း မျှဝေကြမယ်
ယခုလက်ရှိ ရုံတင်ပြသနေတဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစာရင်းကို ဆယ်လီရပ်ကွက်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ... info credit : JCGV , Mingalar Cinema photo credit : official pages . #myanmarmovie #celebrity #celebrities #myanmar #yangon #follow4foll
ဒီတာဇံမလေးကို သိကြသလား ပရိသတ်ကြီးရေ Credit @thinzarwintkyaw #celeyknews #celebrity #celebrities #myanmar #yangon #follow4datew #followforfollow #followme #follow leupdate#tag #tagsforlikes #instagram #photography #photo #photograph #celeactivities #celeup
`Skinella ´ Product မိတ်ဆက်ပွဲကို တက်ရောက်လာသောအနုပညာရှင်များ Skinella Product မိတ်ဆက်ပွဲကို မေလ ၁၇ရက်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ Park Royal ဟိုတယ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် #skinella #product #celeyatkwat #photo -သားကြီး #celeyknews #celebrity #celebrities #mya
ဟာ .. ကြွေပြီ နီနီရယ် ..... အရုပ်မလေးလားလို့တောင် မှားရတယ် ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ - KMA Photo Studio #celeyknews #celebrity #celebrities #myanmar #yangon #follow4datew #followforfollow #followme #follow leupdate#tag #tagsforlikes #instagram #photography
သူမရဲ့အလှ Credit @sueshanaing #celeyknews #celebrity #celebrities #myanmar #yangon #follow4datew #followforfollow #followme #follow leupdate#tag #tagsforlikes #instagram #photography #photo #photograph #celeactivities #celeupdate
အသည်းယားစရာလေးနော် မတ်မတ်က Credit @eichawpo_malaypo #celeyknews #celebrity #celebrities #myanmar #yangon #follow4datew #followforfollow #followme #follow leupdate#tag #tagsforlikes #instagram #photography #photo #photograph #celeactivities #celeupdate